काठमाडौं (अर्घाखाँचीडट्कम) । नेकपा (मसाल) निकट रक्तिम सास्कृतिक अभियानकी जनवादी गायीका लक्ष्मी गुरूङकाे निधन भएको छ ।
रक्तिम सास्कृतिक अभियानकी जनवादी गायीका लक्ष्मी गुरूङकाे बिहीवार निधन भएको हो । श्वासप्रश्वास र निमोनियाद्वारा पीडित गुरुङको २०७८ कात्तिक २५ गते रुपन्देहीको भैरहवामा निधन भएको हो ।
घरमै अक्सिजन लगाएर उपचार भइरहेका बेला थप समस्या देखिएपछि केही दिनअगाडि उहाँलाई उपचारका लागि भारतको गोरखपुर लगिएको थियो । उपचार गरी फर्कंदा पुनः श्वासप्रश्वासको समस्या देखा परेपछि उहाँलाई भैरहवा मेडिकल कलेल अस्पताल पुर्याइएको थियो । त्यहाँ अस्पतालले उहाँलाई मृत घोषणा गरेको थियो ।
उहाँको आजै बुटवलस्थित गुरुङडाँडामा दाहसंस्कार गरिने भएको छ ।
गुरुङ रक्तिम सांस्कृतिक अभियानकी केन्द्रीय सल्लाहकार तथा रुपन्देही जिल्ला समितिकी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले “उत्तरबाट बादल आउँदा” लगायत रक्तिम सांस्कृतिक अभियानद्वारा प्रकशित थुप्रै गीतमा स्वर दिनुभएको थियो ।
कास्की जिल्लाको भदौरे भन्ने ठाउँमा विसं २०२३ सालमा बुवा कृष्ण गुरुङ र आमा गर्भीबाट जन्मिनुभएकी गुरुङ सानैदेखि गीत संगीतमा रुची राख्नुहुन्थ्यो । उहाँ सानै छँदा परिवार रुपन्देहीको बेलैया भन्ने गाउँमा बसाइँ सरेको थियो ।
स्थानीय क्लबहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा गीत प्रस्तुत गर्दागर्दै उहाँ रक्तिमको सम्पर्कमा आउनुभयो र रक्तिम परिवारलाई असंख्य गीतमा सुमधुर आवाज दिनुभयो । गुरुङले थुप्रै पुरस्कार तथा सम्मानहरु पाउनुभएको छ ।
उहाँको परिवारमा एक छोरा र बुहारी हुनुहुन्छ ।
उता जीवन शर्माले लक्ष्मी गुरूङकाे निधनबाट नेपाली सांगीतिक फाँटमा अपूरणीय क्षति पुग्न गएकाे बताएका छन् ।
नेकपा (मसाल) ले रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकार लक्ष्मी गुरुङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७८ कात्तिक २६ गते जारी शोकवक्तव्यमा श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको हो।
गुरुङको निधनले पार्टीले इमान्दार, आशावादी तथा कर्तव्यनिष्ठ सदस्य गुमाउनुपरेको बताइएको शोकवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“का. लक्ष्मी गुरुङको २०७८ कार्तिक २५ गते मृत्यु भएको छ । उहाँको मृत्युप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।
का. गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँले रक्तिम सांस्कृतिक अभियानमा रहेर नेपालको जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो । उहाँको मृत्युबाट पार्टीले एक इमान्दार, आशावादी तथा कर्तव्यनिष्ठ सदस्य गुमाउनुको साथै नेपालको प्रगतिशील तथा जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण प्रतिभा गुमाएको छ । त्यसबाट हाम्रो पार्टीको आन्दोलन तथा नेपालको जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । नेपालको प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनमा उहाँले दिएको योगदान अविस्मरणीय रहने छ ।
अन्तमा हामीले उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ ।”
लक्ष्मी गुरूङकाे बारेमा
रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अधिकांश गीतहरुमा जीवन शर्मासँगै सुमधुर महिला स्वर दिने गायीका हुन्– लक्ष्मी गुरुङ ।
कास्की जिल्ला भदौरेमा जन्मिनु भएका गुरुङ विस २०४७ सालदेखि रक्तिम परिवारमा आवद्ध भएर जागरणका गीत तथा संगीतको सेवा गर्दै आउनु भएको छ । सवैको प्रिय गायीकाको रुपमा स्थापित गुरङको स्वर रक्तिम जनगिती यात्रा भाग ४ वाट निरन्तर रुपमा गुन्जिरहेको छ ।
छिल्लो समयमा स्वास्थ्यको कारणले गीतहरु रेकर्ड गर्न सक्नुभएको थिएन् । झण्डै ४ दर्जन गीतहरु गाइसकेका लक्ष्मी गुरुङका केहि प्रतिनिधी गीतहरु भने यो मेरो जिवन, नेपाली माटोमा फुलेको फुल, परदेशीको सपना, सामान्तले नौ जाल वु्न्छ आदी हुन ।
हाल वुटवल वस्दै आउनु भएका गायीका गुरुङ अहिले रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको केन्द्रिय सल्लाहकारमा हुनुहुन्थ्यो ।